Qalabka suuxinta ee Shiinaha Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka > Qalabka Suuxinta iyo Agabka
Qalabka suuxinta iyo qalabyada loo isticmaalo suuxinta waa in lagu hayaa xaalad wanaagsan oo la dhigo meel si sahlan loo heli karo wakhti kasta. Waa in si joogto ah loo hubiyo tirada, tayada iyo kaydinta dawooyinka, iyo dawooyinka aadka u sunta ah iyo kuwa la qabatimo waa in ay hayaan dad gaar ah, waana in la dejiyaa nidaamka diwaangelinta isticmaalka si adag loo isticmaalo.
Qalabka suuxinta iyo qalabyada kale waa inay lahaadaan qalab dhamaystiran oo ah qalabka gargaarka degdega ah, oo ay ku jiraan dhammaan noocyada daawooyinka gargaarka degdegga ah, intubation endotracheal iyo qalabyada dheeriga ah, bronchoscope fiberoptic, qalabka neefsashada macmalka ah, qalabka dhiig shubista degdega ah, kormeeraha ecg, wadnaha wadnaha iyo dhammaan noocyada kala duwan ee kormeerayaasha.
Qalabka suuxinta iyo qalabyada waa in si sax ah loo diyaariyaa, oo hubi isticmaalka; Haddii lime-ka alkali-ku aanu waxtar lahayn, haddii uu xidhmada daloolista jeermis-dilaha ahi uu dhacay, in tayada iyo ka-hortagga kateetarka kala duwan iyo dawooyinka la isku halleyn karo, waa in si taxadar leh loo hubiyo waxtarka aaladda nuugista iyo kaydinta ogsajiinta.
Qalabka suuxinta iyo qalabyada loogu talagalay baadhitaanada gaarka ah sida gaaska dhiigga iyo serum electrolyte, qalabka waa in la hagaajiyaa ka hor suuxinta si loo isticmaalo wakhti kasta.
Qalabka suuxinta iyo qalabyada, sida cabbiraadda cadaadiska xididdada dhexe, cadaadiska tooska ah ee xididada gudaha, cadaadiska halbowlaha sambabada, cadaadiska sambabada sambabada iyo cadaadiska wadnaha, qalab iyo qalab khuseeya waa in la diyaariyaa.
Waddada Hawada Oropharyngeal
Waddada Hawada Oropharyngeal waxaa badanaa laga sameeyaa caag ama caag, ama bir ama walxo kale oo laastikada ah. Dariiqa hawo-mareenka ee sida caadiga ah loo isticmaalo waa tuubo balaastiig ah oo oval ah oo leh qaab "S", oo ay ku jiraan flange, barkin ilkeed iyo qayb qalloocan oo ka mid ah pharynx.
Maaskarada marin-haweedka Laryngeal waxay ku habboon tahay bukaannada lagu suuxinayo ama suuxdinta daroogada iyo bukaannada u baahan taageero hawo-mareen degdeg ah inta lagu jiro gargaarka degdegga ah iyo dib-u-kicinta si loo gaaro marin-haweedka sare oo siman. Waxa alifay 1983kii Dr. ----Archie Brain, oo suuxinta ku takhasusay UK. Maaskarada laryngeal waxa ay inta badan ka kooban tahay gashad, maaskaro laryngeal galinta, oo tilmaamaysa buufin, tuubo dallad, isku xiraha dhamaadka mishiinka iyo waalka dallaca.
Intubation Endotracheal waa hab lagu geliyo tuubada endotracheal gaar ah trachea ama bronchus iyada oo loo marayo daloolka afka ama sanka sanka iyo glottis, taas oo bixisa shuruudaha ugu fiican ee patentness hawo-mareenka, hawo iyo bixinta oksijiinta, nuugista marin-haweedka iyo wixii la mid ah. Waa cabbir muhiim ah si loo samata bixiyo bukaanada qaba cilladda neefsashada.
Mashiinka suuxinta waa iyada oo loo marayo wareegga farsamada si loo suuxiyo alveoli ee bukaanka, samaynta cadaadiska qayb ka mid ah gaaska suuxinta, oo lagu faafiyo dhiigga, habka dhexe ee neerfayaasha si toos ah u saameeya saameynta, sidaas darteed soo saarida saameynta suuxinta guud. Mashiinka suuxinta waxaa iska leh aaladda suuxinta qayb-furan. Waxay inta badan ka kooban tahay haanta uumiga suuxinta, mitirka dareeraha, hawo-mareenka laablaaban ee neefsashada (oo ay ku jiraan nuugista iyo baallayaasha hal-jidka ah iyo bacda hawada gacanta), tuubooyin jiingado ah iyo qaybo kale.
Qalabka Caafimaadka Mashiinka Suuxinta
Mashiinka suuxinta ee qalabka caafimaadku waa mashiin neefsasho macmal ah oo si toos ah u keena dawooyinka suuxinta jirka bukaanka. Takhtarka suuxinta ayaa xakameyn kara xadiga suuxinta ee jirka bukaanka,isaga oo hagaajin kara qoto dheer ee suuxinta,mashiinku wuxuu muujinayaa waxa ku jira ogsijiinta iyo uruurinta kaarboon laba ogsaydh ee jirka bukaanka.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Suuxinta iyo Agabka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Suuxinta iyo Agabka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Suuxinta iyo Agabka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.